Semalt ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ၎င်းသည်အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာကိုတိုးမြှင့်လိုကြသည်။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်သူတို့အောင်မြင်မှုရဲ့အုတ်မြစ်ပဲ။
သင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအခမဲ့နှင့်ပေးဆောင်ရသော SEO ဝန်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ၊ သင့် site ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသွားအလာကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သော tool တစ်ခုမှာ Semalt ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီ Semalt ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှာမင်းတကယ်ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာကိုမင်းတို့ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။
ဤတွင် Semalt တွင် SEO (Search Engine Optimization) အတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို SEO နှင့်သာမက web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပါအောင်မြင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ (နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းပိုမို) ။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာ SEO ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်နေသောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ချစ်မြတ်နိုးသည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှဖောက်သည်အောင်မြင်မှုအထိလူသားအရင်းအမြစ်များအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏လူသား (နှင့်လိပ်) အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့် သင် တွေ့ဆုံ နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အခန်းကဏ္whatကိုသင်မြင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝါသနာအနည်းငယ်ကိုလေ့လာပြီးနောက်မည်သည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းဆက်နိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ တူရကီနှင့်အခြားဘာသာစကားများစွာကိုပြောဆိုနိုင်သည်။ )
Turbo ကငါတို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့ ၀ င်တစ်ယောက်ရှိတယ်။
၂၀၁၄ မှာငါတို့ရုံးခန်းအသစ်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ Turbo ကိုပန်းပွင့်အိုးဟောင်းတစ်လုံးမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အရင်ရုံးပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုထားခဲ့တယ်။
အိုး Turbo လိပ်တစ်ကောင်ဆိုတာငါတို့ပြောသင့်တယ်။
အဲဒီအခြိနျမှစ။ သူ့ကိုငါတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ mascot အဖြစ်မွေးစားခဲ့သည်။ ယခုသူသည်ယူကရိန်းရှိကျွန်ုပ်တို့တည်နေရာရှိကြီးမားသောငါးမွေးကန်ကြီးတစ်ခုတွင်နေထိုင်သည်။
ဒါကြောင့် ငါတို့အဖွဲ့ ၀ င် တွေက မင်းအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ။ ငါတို့ရှိသမျှသည် SEO ဆိုသည်မှာ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု ဆိုသည်မှာအချို့သော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ကိုရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်လာစေရန်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပေးဆောင်သောကြော်ငြာများကိုရယူခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်မှာ SEO ဆိုသည်မှာအားလုံးသောအော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်။
သင့်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိပြီးမင်းအသွားအလာတိုးချင်ရင် SEO ဟာသင့်အစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
SEO သည်လူကြိုက်အများဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သော Google ကိုနှစ်သက်သည်။ ပြီးတော့ဂူးဂဲလ်မှာရှာဖွေသူရှာဖွေနေတဲ့အရာအပေါ်အခြေခံပြီးရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ algorithm တစ်ခုရှိသည်။
အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်တွင် SEO ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည်။ on-page SEO နှင့် off-page SEO ။
On-page SEO ဆိုသည်မှာသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွင်း၌သင်ထိန်းချုပ်သောအချက်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတွင်ဆိုဒ်၏အမြန်နှုန်း၊ ကုဒ်ထိရောက်မှု၊ အကြောင်းအရာအရည်အသွေးနှင့်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အပြင်အဆင်နှင့်ဒီဇိုင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအရာများသည်သင်၏ SEO လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
စာမျက်နှာပြင်ပ SEO ဆိုသည်မှာ အခြား ၀ ဘ်ဆိုဒ်များမှ backlinks၊ လူမှုမီဒီယာလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပြင်ပရှိအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များကဲ့သို့သောအချက်များပါဝင်သည်။ စာမျက်နှာပြင်ပ SEO အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်များတွင် backlink အရေအတွက်နှင့်ထို backlink များ၏အရည်အသွေးတို့ပါဝင်သည်။
သင်၏စက်ရုံရှိအခြားအရည်အသွေးမြင့်သောဆိုဒ်များကသင်၏ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါကသင့်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ဂူဂဲလ်ကဒါကိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးမှာပါ။
သို့သော်၊ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာများကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာရေရှည်ဂိမ်းဖြစ်သည်။
သင်အံ့သြဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်ပါက ဦး စားပေးဂူဂဲလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ခံရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ကအကြောင်းအရာများစွာကိုဖြည့်စွက်လျှင်လူများသည်သင်၏ဆိုက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးအခြားသူများကိုပို့လိမ့်မည်။
Semalt သည်အခကြေးငွေ ပေး၍ အခမဲ့ဖြစ်သော SEO ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်စုံကိုပေးသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအမိုးအောက်တစ်ခုအောက်တွင်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်စေနိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီကိုအတိုချုပ်ပြောပြပါရစေ။ ဒါကသင့်ကိုဘာအကျိုးအမြတ်ရမလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ AutoSEO အထုပ်သည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်“ အပြည့်အဝအိမ်” ဟုခေါ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဤအထုပ်နှင့်အတူသင်ရ:
သင်သည်သင်၏အံ့သြဖွယ် website ကိုဖန်တီးပါ။ ဂူဂဲလ်အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးပြုလုပ်သည်။
“ White Hat” SEO နည်းပညာကို သုံး၍ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒေါ်လာ ၀.၉၉ ဖြင့်တိုးတက်နိုင်သည်။
အခြေခံ SEO ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သောအတွင်းပိုင်း optimization၊ အမှားပြင်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာရေးသားခြင်း၊ link ၀ င်ငွေနှင့်အထောက်အပံ့စသည်တို့သည် FullSEO နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO အဖွဲ့သည်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သီးသန့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သင်အဆင့်မြင့်ရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုကြည့်ပြီးသင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုးတက်စေရန်အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
Semalt Web Analytics နှင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့် site ကိုပိုမိုရှာဖွေနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပါ
ပြိုင်ဘက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် tab များကိုသိမ်းထားပါ
ပြည့်စုံသော web-ranking အစီရင်ခံစာများရယူပါ
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုသင်သိရန်၊ ပျောက်ဆုံးနေသောအပိုင်းများကို ဦး စွာတွေ့ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်သင်အကြံပြုသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေနိုင်သည်၊ လူများရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
Semalt Web Analytics သည် -
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အဝေးသွားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် visitors ည့်သည်များကိုကြိုဆိုပြီး၎င်းတို့အားမှန်ကန်သောလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည့်ချောမွေ့ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသွင်အပြင်နှင့်အမြန်နှုန်းသည်သင်၏ပျမ်းမျှနှုန်းနှင့်ပျမ်းမျှစာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်းအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဒါကသင်၏ SEO ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုင်းသည်မြန်ဆန်။ သွားလာရန်လွယ်ကူပြီး SEO အတွက်အပြည့်အဝအပြည့်အဝအသုံးချသည်။
ဗွီဒီယိုများသည်သင့်ဖောက်သည်များကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရုံသာမက၎င်းတို့ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြာရှည်စွာသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထိုသင်၏ SEO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဘို့ကြီးသောပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် voiceover အခွက်တဆယ်ကိုပေး!
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါတို့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းဆက်လုပ်နိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြလို့ပါ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောဆိုသောစကားကိုကြားလျှင်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာငါတို့အကြိုက်ဆုံးဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်အချို့ ...
MALO CLINIC မှ Kristian က“ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ဟာ Semalt ... ကိုအမျိုးသားအဆင့်ထိပ်တန်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်သင်တိုးတက်လိုလျှင် Semalt သည်အကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။
Msofas လီမိတက်မှ Wojtek က“ ငါပြောရမယ့်အကောင်းဆုံး SEO ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲကတစ်ခု။ “ ငါ SEO ကုမ္မဏီမျိုးစုံကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလိုချင်တာကိုမရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် Semalt နဲ့အတူငါနောက်ဆုံးရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကဘာလိုအပ်သည်ကိုသူတို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်၎င်းတို့အားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်ငွေတိုးလာခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာ Volodymyr Skyba ကိုကျွန်တော်တို့မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်များနှင့်အပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်" ဟု Baja Properties မှစပိန်စကားပြောဟိုဆေးကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာသော့ချက်စာလုံးအမျိုးမျိုးကိုနံပါတ်တစ်နေရာမှာထားပြီးနံပါတ်တွေအများကြီးကအီးမေးလ်တွေခေါက်နေတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝဘ်မာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့ဖြစ်မြောက်ဖို့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲဆိုတာကိုငါတွေးနေတုန်းပဲ။ ”
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ငါတို့ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ကြတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသူတို့ကိုချက်ချင်းကိုချစ်!
သင် Semalt ၏ပင်မစာမျက်နှာ သို့ ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်သင်၏ဒိုမိန်း၏အရည်အသွေးကိုပြသသောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏ URL ကိုရိုးရှင်းစွာရိုက်။ “ Start Now” ကိုနှိပ်ပါ။
အဲဒီလိုလုပ်ပြီးနောက်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်တောင်းခံရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီးစကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးပြီးသင့်နာမည်ကိုပြောပြပါ။
သင်၏အစီရင်ခံစာကိုသင်ရရှိနိုင်ပြီးနောက်ထပ်မွမ်းမံမှုများကိုလည်းသင်၏ inbox ထဲသို့ပို့နိုင်သည်။
သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဒိုင်ခွက်ထဲကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဤနေရာတွင်သင်၏အဆင့်ကိုကြည့်နိုင်သည်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ညာဘက်တွင်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်သည်သော့ချက်စာလုံးအသစ်များကိုပင်ထည့်နိုင်ပြီးအပြည့်အ ၀ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်သော့ချက်စာလုံးအစီရင်ခံစာကိုကြည့်နိုင်သည်။
ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ Website Analyzer tab ကိုသွားခြင်းဖြင့်၊
အသေးစိတ် SEO သတင်းအချက်အလက်
Project Center နှင့်ဆက်စပ်သောအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန် Report Center tab သို့သွားနိုင်သည်။
သင်၏အစီရင်ခံစာသို့၊ သင်စစ်ထုတ်ခြင်းများ၊ အဆင့်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့်ရက်စွဲများကိုထည့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင့်အစီရင်ခံစာအားမည်ကဲ့သို့နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ထုတ်ပြန်မည်၊
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပိုမိုအကူအညီရရန်သင်အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ဗဟုသုတနှင့်ထိပ်တန်းအသင်း ၀ င်များ၏ကျေးဇူးကြောင့်သင့်အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ထိပ်ဆုံးသို့တက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဤ Semalt ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အဆင့်တွင်ဤအခမဲ့နှင့်ပေးဆောင်ထားသော SEO ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်မျှအထောက်အကူပြုမည်ကိုဖော်ပြသည်။ နှင့်သင့် site ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုကောင်းလေသင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများလေလေဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ SEO နှင့် visit ည့်သည်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင့်အားရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှသင်ဖုံးလွှမ်းထားပါသည်။
သင်၏အခမဲ့ site report အပြီးတွင်သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်လိမ့်မည်!